घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डेनिश फुटबल खेलाडीहरू कास्पर स्मीचेल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
कास्पर स्मीचेलको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी (स्टाइन ग्लाडेनब्रान्ड), बच्चा, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षिप्तमा, हामी तपाईंलाई उपनामबाट चिनिएको लीसेस्टर प्रेरित गोलकीपिंग लीजेन्डको इतिहास दिन्छौं।बिग डेन“। हाम्रो कथा उसको शुरुका दिनहरूदेखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाइँलाई कास्पर स्मीचेलको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
कास्पर स्मीचेलको जीवन र उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उनी पूर्व म्यानचेस्टर युनाइटेड र डेनमार्कका अन्तर्राष्ट्रिय लीजेन्ड पीटर स्मीचेलका छोरा थिए। यद्यपि केवल केहि व्यक्तिले कास्पर स्मीचेलको जीवनी लिन्छ जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं.
कास्पर स्मीचेल बचपन कहानी - परिवार पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन:
क्यास्पर पीटर स्मीचेलको जन्म November नोभेम्बर १5.5 को दिन डेनमार्कको कोपेनहेगन शहरमा उनकी आमा बेन्ते श्मिचेल (घरधनी) र बुबा पीटर पीटर स्मीचेल (द लेजेन्डरी गोलकीपर) मा भएको थियो। कास्पर श्मिचेलका अभिभावकलाई तल भेट्नुहोस्।
कास्पर स्मीचेलका अभिभावक- पीटर र बेन्टेलाई भेट्नुहोस्।
पारिवारिक मूल: आफ्नो हजुरबुबा मार्फत कास्पर (डेनिश संगीतकार) बाट उसको परिवारको जरा छ पोल्याण्ड र हैन डेनमार्क जुन धेरै फुटबल प्रशंसकहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनका हजुरबुवा, जो टोलेक श्मिचेलको नामबाट जान्छन् १ 1960 around० तिर डेनमार्कमा बसाई सरेका थिए। क्यास्परको हजुरबुबा (टोक) एक लडाकू बच्चा थियो जसको उसको बुवा थियो (क्यास्परको महान-हजुरआम) दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा पोलिश सिपाहीको रूपमा मारिए। उसको महान-हजुरआमा एक सिपाही हुनु भनेको कास्पर स्मीचेलको परिवारमा सैनिक जरा छ।
टोकक्यास्परको ग्रान्ड्याड) पोल्याण्ड डेनमार्क छाडे जहाँ उनकी श्रीमतीले बच्चा जन्माई र उनको लेजेन्ड्री छोरा पीटर स्मीचेल हुर्काइन्। सैन्य परिवारको जराको यो कच्चा मानसिक शक्ति, एक मजबूत शरीरको साथ सम्बन्धित पीटर स्मीचेलमा हस्तान्तरण गरियो जसले फुटबलमा नाम कमाउन प्रयोग गर्‍यो र त्यसपछि स्थानान्तरण गरियो जीन उनको प्यारो छोरो कास्परलाई।
पौराणिक पिटर श्मिचेल एक्सएनयूएमएक्स थिए जब उनकी पत्नी बेन्टेले कास्परलाई जन्म दिए जसले उनलाई पहिलो पटक बुबा बनायो। सानो कास्परले तल देखाईएको छ कि एक सम्पन्न जीवन बिताए किनभने उनको बुवा प्रसिद्ध थियो। ऊ बच्चा हो जसको आमा बुबाले गर्न सक्ने प्रकारको थियो उसको लागि खेलौनाहरूको नयाँ संग्रह स afford्कलन गर्नुहोस्। कास्पर एक्लो हुर्किएन, तर उनको बहिनी सँगै जो सिसिली श्मिचेल नामबाट जान्छन्। १ 1990 XNUMX ० को सुरूमा प्यारा परिवारको फोटो तल छ।
१ 1990 XNUMX ० को प्रारम्भमा कास्पर स्मीचेल परिवारको फोटो।
क्यास्पर स्मीचेल बचपन कहानी - क्यारियर निर्माण र शिक्षा:
पूर्व निर्धारित निर्धारित गन्तव्य: १ joining 1991 १ को कास्परका बुवा युनाइटेडमा जानु भन्दा पहिले सन् १ XNUMX। १ को सुन्दर ग्रीष्म साँझमा, पीटर स्मीचेल आफ्नो क्लबको (ब्रान्डबी आईएफ) फुटबल क्लब हाउसमा थिए जसले आफ्नो पाँचौं डेनिस लिग शीर्षक मनाइरहेका थिए। उसले थोरै पार्टी गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसलाई पाहुनालाई आमन्त्रित गर्यो जसमा प्राय जसो क्लब फ्यानहरू थिए।
आमन्त्रित प्रशंसकहरू र भोजमा प्रवेश गर्ने क्रममा,4वर्ष पुरानो कास्पर स्मीचेल ढोका प्रवेशद्वार अगाडि दृढ अनुहारको साथ उभिए र आगन्तुकहरूलाई भने,तपाईं सबै यहाँ आउन सक्नुहुन्न!"……"हो, हामीलाई अनुमति छ, हामीलाई तपाईंको बुवाले आमन्त्रित गर्नुभयो"उनीहरूमध्ये एक जनाले जवाफ दिए कि उनले कास्परलाई बिस्तारै आफ्नी आमासँग भेट्टाए र आफ्ना सह प्रशंसकहरूलाई भित्र जान दिए। पार्टी चलिरहे र केहि हप्ता पछि, पीटर स्मीचेलले म्यानचेस्टर युनाइटेडमा आफ्नो सफल क्यारियरलाई निरन्तरता दिए।
लगभग २ 25 बर्ष पछि अगाडि कास्परलाई आगन्तुकहरूको बाटोमा उभिएको देखिएन - तर यसपटक सबै प्रकारका फुटबल विरोधीहरूले बललाई पछाडि राख्ने लक्ष्य राखेका थिए। अब हामी तपाइँलाई कसरी यात्रा सुरु भयो भनेर छोटो कथा दिनुहोस्।
कुन कुराले उसलाई आफ्नो बुबाको पदचिन्ह पछ्याउन प्रेरित ग .्यो:7र of वर्षको उमेरमा, १ 8 1992 २ र १ 1993 XNUMX in मा, कास्परका बुबा पीटरलाई मतदान गरियो IFFHS विश्वको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। बुबा थियो जो थियो छैन केवल विश्वका सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, तर जसले म्यानचेस्टर युनाइटेडको साथ श्रृंखलाको शीर्षक खेल्छन्, जवान कास्परलाई आफ्नो बुवाको पाइला पछ्याउन सजिलो थियो।
पिटरको प्रारम्भिक क्यारियर सफलता कास्परलाई उनको पाइला टेक्न प्रेरित गरियो।
कास्परले आफ्नो बाल्यावस्थाको धेरैजसो समय आफ्नो बुबाको क्यारियर सफलताको आनन्दमा बिताए। उनले बुबाको खेल क्यारियरको कारण इ England्ल्याण्डमा स्कूली शिक्षा दिन शुरू गरे। कास्परको शुरुमा शिक्षा थियो Hulme हल व्याकरण स्कूल ग्रेटर म्यानचेस्टर मा स्थित। उनी पुस्तकहरु पढे पनि उनी खेलकुदप्रति समर्पित थिए। पछि स्कूल बाहिरको अवधिमा, क्यापरले आफ्ना साथीहरूसँग गोलकीपिंग फुटबल खेल्थे जुन बीचमा थियो एलेक्स ब्रुस- कास्परको बुबाको पूर्व म्यानचेस्टर युनाइटेड टीम साथी स्टीव ब्रूस.
कास्पर स्मीचेल बाल्यकाल कहानी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
जबकि अन्य बच्चाहरू फुटबलरहरूले एक फुटबल एकेडेमीमा सम्मिलित भएर आफ्नो क्यारियर सुरु गर्छन्, कास्परले उनको बुवाको शिकारमा शुरू गरे। म्यानचेस्टर युनाइटेड व्यवस्थापनले उहाँलाई आफ्नो महान बुबालाई प्रशिक्षणको लागि अनुसरण गर्न अनुमति दियो। प्रारम्भमा, उनलाई गोल पोष्टको पछाडि खडा हुन मन परेको थियो जबकि म्यानचेस्टर युनाइटेड महापुरुषहरू रेलमा। कास्पर गोल छुटाएको वेवर्ड शटहरू ल्याउन दौड्यो र त्यसपछि प्रख्यात पुरानो ट्राफर्डमा प्रत्येक एक खेलमा भाग लिन जान्छ।
कास्पर स्मीचेलका बुबाले उनको म्यानचेस्टर युनाइटेड क्यारियरको उच्च नोटमा समाप्त गरे जब उनले युनाइटेडलाई १ 1999 36। को ट्रबल जित्न निर्देश गरे। XNUMX XNUMX बर्षको उमेरमा, पत्रुसले पोर्तुगाल (स्पोर्टि CP सीपी) मा फुटबलको एक ढिलो गति लिन खोजे, जसको विकासले सम्पूर्ण स्मीचेल परिवारलाई इ little्गल्यान्ड पोर्चुगल छोडेको देख्यो।
सन् २००० मा, जब कास्पर पोर्चुगलमा आफ्ना बाबुआमाको साथ बस्थे, उनी आफूलाई एस्टोरिल फुटबल एकेडेमीमा भर्ना भए जुन सामान्य रूपमा चिनिन्छ। ग्रूपो डेस्पोर्टिभो एस्टोरिल। एकेडेमीमा हुँदा, कास्परले आफ्नो बुवाको पाइला पछ्याए। प्राय: प्रशिक्षण सत्र पछि, उनी आफ्नो बुबाबाट स्पोर्टि CP सीपीमा अतिरिक्त पाठ प्राप्त गर्दै थिए। यो १ 1999 2001 XNUMX देखि २००१ सम्म भएको थियो।
कास्पर स्मीचेलले आफ्नो शुरुआती क्यारियरका दिनहरू बुबाबाट धेरै नै सिकेका थिए।
कास्पर स्मीचेल बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
पोर्तुगालमा दुई बर्ष पछि, श्मिचेल परिवारले यो देशमा लामो समयसम्म रहिरहेको महसुस गरे। फेरि, कास्परले यस पटक क्लब छोड्ने निर्णय गरे, आफ्ना बुबालाई पछि इ England्गल्यान्ड फर्कने जहाँ उनले एस्टोन भिल्लाको लागि खेल्न सुरु गरे। कास्परले म्यान शहरसँग हस्ताक्षर गरे र केहि महिना पछि, उनी आफ्नो बुवासँग पुनर्मिलन भए, यस पटक सोही क्लबमा। तपाईंलाई थाँहा थियो?… दुबै बुबा र छोराले म्यान सिटी एकेडेमीका लागि खेल्ने पहिलो गोलकीपर र वर्ष 2002 मा वरिष्ठ पक्ष बनेर इतिहास बनाए।
२००२ मा म्यानचेस्टर शहरको लागि खेल्दा आफ्ना बुबा पीटरसँग कास्पर स्मीचेलको दुर्लभ फोटो।
जब कास्परका लागि ग्रो टफ गयो: किनकि तिनी एकेडेमीमा स्नातकको लागि योग्य थिएनन्, शहरको साथ र सन् २०० 2003 मा फुटबलबाट निवृत्त भएपछि कास्पर आफ्नो बुबाको जुत्ता सजिलैसँग भर्न सकेन। पीटर स्मीचेलको ठाउँ।
युवा फुटबल स्नातक पछि, उनले वरिष्ठ फुटबल मा एक सहज यात्रा गर्न लाग्नुभयो जो लाग्यो कास्पर योजनाहरु को लागी चीजहरु उनीहरु को लागी देखेनन्। त्यतिखेर, वरिष्ठ गोलकीपिंग स्थानको लागि ठाउँ लिईएको थियो Joe Hart जो एक स्थिर वृद्धि मा थियो र अपूरणीय मानियो। यस विकासले निराश कास्परलाई निराश बनायो।
क्यास्पर स्मीचेल- जो हार्ट प्रतिद्वंद्वी।
वर्षौंदेखि यति धेरै सफलता पाइसकेपछि श्मिचेल परिवारलाई ईस्टल्याण्ड्समा आफ्नै झुकाव क्रमले नै गिरेको देखेर सामना गर्न गाह्रो भयो। विकल्पहरूको खोजी गर्दै, कास्पर स्मीचेलले पहिलो टीमको गोलकीपरको रूपमा चिनिनको लागि विभिन्न सर्प र भर्या throughबाट यात्रा शुरू गर्यो। 2006 बाट 2009 मा onण मा गएर र आफ्नो सीनियर क्यारियर चाँडै सुरु गरेर उनले आफ्नो बकाया भुक्तान गरे Bury, Falkirk र नट्स काउन्टी र लीड्स।
एक उद्धारकर्ता अन्ततः कास्परलाई बचाउन आयो। यस पटक, यो उनका सुपर बुबा थिएनन्, तर नट्स काउन्टीका प्रबन्धक, स्भेन-गोरन एरिक्सन जसले उनलाई लेसेस्टरको साथ पहिलो टीमको गोलकीपिंग भूमिका सुरक्षित गर्न मद्दत गरे। उसले जून २०११ को २ on तारिखमा गोलकीपर वफादार कस्परलाई पुष्टि गर्‍यो।
नभेन काउन्टीमा जोडीले सँगै काम गरे पछि स्भेन गोरन एरिक्सनले कास्पर स्मीचेललाई लेस्टरमा आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न मद्दत गरे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो स्भेन-गोरन एरिक्सन हो जसले आइभरी कोस्टलाई एक्सएनयूएमएक्स फिफा वर्ल्ड कपमा व्यवस्थित गरे।
कास्पर स्मीचेल बायो - फेम टू फेम स्टोरी:
कस्पर स्मीचेलले १ss सफा पानाहरू दिएर 17२ खेलमा चारवटा पेनल्टी बचत गरेर आफ्नो मालिकको पक्षमा फिर्ता फिर्ता गरे। २०११-१२ सत्रमा उनको प्रदर्शनले उनलाई क्लबको प्लेयर अफ द इयर र प्लेयर अफ प्लेयर अफ इयर अवार्ड प्रदान गरेको छ।
कस्परले ठूलो पैसा खर्च गर्नुको सट्टा लिसेस्टरलाई अंग्रेजी फुटबलमा लोकप्रिय बनाउन मद्दत गर्ने निर्णय गरे। 2013 – 14 seasonतुमा, उनका नौ सफा पानाहरू र डिसेम्बर देखि अप्रिलसम्म 19 खेल अजेय रनले लीसेस्टरलाई छ वटा खेलहरूको साथ एक प्रीमियर लिग पदोन्नतीको ग्यारेन्टी गर्न मद्दत गर्‍यो।
डेनको लागि सब भन्दा ठूलो दिन मे2को 2016nd मा आयो, जब उसले आफ्नो टीमलाई 29 वर्षको उमेरमा प्रिमियर लिग उपाधि जित्न मद्दत गरे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो उही उमेर र उही क्यालेन्डर दिन क्यास्परको बुबाले १ 1993 XNUMX in मा म्यानचेस्टर युनाइटेडको पहिलो प्रिमियर लिग खिताब जित्यो।
कास्परले २ years बर्षको उमेरमा, उही उमेर र उही क्यालेन्डर दिन प्रीमियर लिगको उपाधि जितेका थिए जब उनका बुबाले १ 29 in मा समान उपाधि जितेका थिए।
एक विश्व कीर्तिमान सिर्जना गर्दै, स्मीचेल्स एक मात्र जैविक बुबा र छोरा बनिन् जुन प्रिमियर लिग जित्नका साथसाथै उही स्थितिमा थिए। लेख्ने समयमा, कास्परले आफ्नो बुवालाई अझ प्रख्यात बनाएका थिए किनकि उसले आफ्नो गोल 0-9 अक्टूबर 25th को 2019th दिनमा साउथेम्प्टनलाई हरायो।
कास्पर स्मीचेलले0गोल स्वीकार्यो साउथेम्प्टनको ०-0गिरावटमा
कास्पर स्मीचेलको श्रीमती, स्टाइन गिल्डेनब्रान्डको बारेमा:
पिटरमा सफल गोलकीपर पछाडि कास्परमा एक छोरा थियो। र कास्परको हृदयमा, त्यहाँ आयो प्रेम एक ग्लैमरस केटी फार्म जो एक पटक 2004 वर्ष मा प्रेमिका बन्न अघि उसका आँखा घुमायो। स्टाइन गिल्डेनब्रान्ड डेनिस महिला हुन् जसले जन 1985 मा जन्म लिइन्, जसको अर्थ उनी कास्परको भन्दा लगभग2वर्ष पुरानो छिन। उनी स्टारडममा उत्रिन् जब उनले 2004 मा आफ्नो युवा क्यारियरको अन्तिम वर्षमा कास्परलाई डेटि began गर्न थालिन्, त्यतिबेला क्यास्पर केवल एक्सएनयूएमएक्स वर्षको थिइन।
कास्पर स्मीचेलले १ St वर्षको उमेरमा स्टाइन गिल्डेनब्रान्डको डेटि began गर्न शुरू गरे।
उनीहरूले भेटेको सुन्दर दिन, स्टाइन गिल्डेनब्रान्ड भर्खर भर्खरको विद्यार्थी भइसकेका थिए जसले चेस्टर युनिभर्सिटीमा मिडवाइफरीमा डिग्री लिन भर्ना गरे। एक्सएनयूएमएक्समा उनको स्नातक पछि, उनले बर्मिंघम नजिकैको अस्पतालमा काम गर्न थाले र एक वर्ष पछि (2009), दुबै प्रेमीहरूले आफ्नो पहिलो बच्चालाई स्वागत गरे, जसको नाम उनीहरूले म्याक्स श्मिचेल राखे। दुई वर्ष पछि (2010), तिनीहरूसँग इसाबेला स्मीचेल थियो।
कास्पर स्मीचेलको पत्नी, स्टाइन ग्लाडेनब्रान्ड, उनको छोरो म्याक्स स्मीचेल र छोरी इसाबेला स्मीचेललाई भेट्नुहोस्।
कास्परले उनको प्रेमिका र उनका बच्चाहरूको आमालाई 11 वर्षको लागि प्रस्तावित गरे र उनको साथ गाँठो बाँध्ने निर्णय गर्नु अघि। दुबै प्रेमीहरूले लोकप्रिय मा 2015 मा विवाह गरे Egebæksvang किर्के चर्च डेनमार्क मा आफ्नो गृहनगर मा स्थित। समारोहमा सबै परिवारका सदस्यहरू उपस्थित थिए।
कास्पर स्मीचेलले उनीहरूको विवाहको दिनमा उनकी श्रीमतीसँगै चित्रण गरे।
उनीहरूको विवाह पछि, Stine उनको शिक्षा मा पछि गएका थिए। उनले भर्खरै गर्भावस्थामा महिलालाई सहयोग पुर्‍याउने र जन्मेको जन्मेको स्वस्थ जीवनशैली प्राप्त गर्ने ज्ञानको विकासको लागि व्यक्तिगत प्रशिक्षकको रूपमा शिक्षा पूरा गर्‍यो। लेख्ने समयमा, स्टाइनले हाल दुई नाम ओगडाईरहेको छ; को Gyldenbrand Schmeichel फाउंडेशन र fodboldfonden उनको पति र साथी क्रिस्टिन Kvist संग।
कास्पर स्मीचेल व्यक्तिगत जीवन:
टाढाबाट कास्पर स्मीचेल व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
कास्पर श्मिचेल व्यक्तिगत जीवन अफ-द-पिचका बारे जान्न। छवि क्रेडिट - ट्विटर
सुरूवात गर्दै, कास्पर त्यस्तो मानिस हो जो संसाधन, बहादुर र भावुक हुन्छ। उहाँ एक सच्चा नेता हुनुहुन्छ जो धेरै पिचमा र बाहिर पिच गर्ने कार्यको लागि समर्पित छ। कास्पर बिभिन्न मानव ब्यबहारहरु लाई अझ सजिलैसंग उनीसंग आफ्नो बुबासँग तुलना गर्ने सार्वजनिक छानबिन गर्न मा सक्षम छ। यस अनुसार संरक्षक,
“गोलकीपरको रूपमा जीवन खोज्नु सब भन्दा सजिलो लक्ष्य थिएन। अहिले पनि, अपरिचितहरु केहि बुद्धिमत्ताको साथ आउँदछन् कि म कहिले पनि राम्रो छैन जस्तो म मेरो बुबा हो। यस किसिमको न्याय हुनु भनेको मैले सकेसम्म निजी रूपमा बस्न खोजेको हुँ। ”
उसको आफ्नै मानिस हुनु, आफ्नै गुणहरु, आफ्नो दिशा, आफ्नै शैली, आफ्नै महत्वाकांक्षाहरु कास्परले चाहेको हो।
Being२ बर्षको भए पनि (लेखेको समयमा) र दुई बच्चा भए पनि मानिसहरूले कास्परलाई अझै कसैको छोराको रूपमा लिन्छन्। यद्यपि उनी अझै पनी धेरै प्रशंसकहरु छन् जसले आफ्नो अभिलाषालाई चुप लागेर कुनै अभिव्यक्ति वा चुपचाप नगरी प्रशंसा गर्दछन्।
कास्पर स्मीचेल पारिवारिक जीवन:
श्मिचेल परिवार युनाइटेड किंगडममा बस्ने डेनिसको सबैभन्दा सफल इकाई हो। यो एउटा सानो परिवार हो जसको फुटबल फेमको केन्द्रमा आणविक पक्ष छ। श्मिचेल परिवारका प्रत्येक सदस्य डेनिस र अंग्रेजी दुबै भाषाहरू (उत्तरी-अंग्रेजी उच्चारण) को मूल वक्ता हुन्।
कास्पर श्मिचेल परिवारका सदस्यहरू आफ्नो प्रिमियर लिगको विजेता मनाउँदै।
कास्पर स्मीचेलका पिताको बारेमा: माथि उल्लेख गरिएझैं पीटर स्मीचेल विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट गोलकीपर थिए र उनले अग्रणी लिग इतिहासमा म्यानचेस्टर युनाइटेडमा देखेका थिए। पत्रुस यस संसारमा बसे सर एलेक्स फर्ग्युसनको म्यानचेस्टर युनाइटेडमा सुनहरा युग। उपनामठूलो डेन', उहाँ आफ्नो गोरा कपाल, ठूलो फ्रेम र inimitable गोलकीपिंग शैली को लागी प्रसिद्ध थियो।
आश्चर्यजनक रूपमा, श्मिचेलको छोरा कास्परले आफुलाई आफ्नो बुबाको शैली र आफ्नो ठूलो फ्रेमको एक सानो रूपमा देखेको छु। दुबै बुबा र छोराले एक अर्कालाई सम्मान गर्छन् र आफूलाई सार्वजनिक तुलना गर्न इन्कार गरेका छन्।
फादर पिटर र कास्परको छोराको खेल - दुबै वास्तवमा किंवदन्तीहरू हुन्।
पीटर श्मिचेल लेखनको समयमा आफ्नो पूर्व पत्नी बेन्टे (कास्परको आमा) बाट अलग भइसकेका थिए जुन कुरा दम्पतीको लागि गाह्रो निर्णय हो। जून २०१ round को आसपास, पीटर स्मीचेलले डेनमार्कको एस्पेरगर्डेमा छोटो प्रसंग पछि पूर्व Pl * yboy मोडेल- लौरा भोन लिन्डहोलमसँग विवाह गरे। क्यान्पर स्मीचेलको स्टेप मम, जो भोन लिन्डहोलम नाम बोक्छन् एक विशेष पोषण विशेषज्ञ र अभिनेता हुन्। पिटर स्मीचेलले आफ्नी श्रीमतीलाई किन सम्बन्धविच्छेद गर्नुको कारण पत्ता लागेको छैन।
कास्पर स्मीचेलको बुबा विवाह।
कास्पर स्मीचेलको आमाको बारेमा: बेन्ते श्मिचेललाई उनको श्रीमान र घरको प्रबन्ध गर्ने तरिकामा ठूलो श्रेय दिईन्छ विशेष गरी जब उनी आफ्नो गोलकीपिंग शक्तिको शिखरमा थिए। उनी आफ्नो पति र छोरा भन्दा फरक छन् सार्वजनिक मान्यता खोज्न को लागी एक सचेत छनौट गरेको छ। यद्यपि तलको फोटोबाट न्याय गर्दै (जब कास्परले 2016 डेनिश पुरुष प्लेयर अफ द ईयर पुरस्कार जित्यो), सुपर आमाले एक पटक यस अवसरलाई आफ्नो चराहरूको उपलब्धीको लागि गर्व गरीरहेको देखी।
कास्पर स्मीचेलको आमा उनको छोराको उपलब्धिहरुमा अत्यधिक गर्व गर्दै आएको छ।
कास्पर स्मीचेलको बहिनीको बारेमा: सिसिली श्मिचेल जो हुर्केका छन् सबै क्यास्परको एक मात्र भाईबहिनी हुन्, कुनै भाइ (हरू) र बहिनी (हरू) को साथ। उनको महान बुबा र ठूलो भाई (तल उनको चित्रमा) को लागी धन्यवाद, सेसिली श्मिचेल उपनाम वहन गर्नमा ठूलो गर्व छ।
कास्पर स्मीचेलको बहिनी- सेसिली पिलकार स्मीचेललाई भेट्नुहोस्।
उनको प्रसिद्ध उपनाम र वैवाहिक जीवनको बारेमा कुरा गर्दै, उनले एक पटक भनेकी थिइन;
"मेरो पछाडि परिचित उपनामको साथ, मसँग सधैं एउटा सेलिब्रेटीको जीवनको विलासिता हुन्छ। अहिले म विवाहित भएको छु र अब आफ्नै खुट्टामा उभिएको छु, म जीवनको अर्कोतर्फ साधारण जीवन बिताउँछु। ”
सेसिलीको अब दुई बच्चाहरू (नूह र सोफी) सँग विवाह भएको छ र अब उनको नाम सेसिल पिल्कर स्मीचेल छ। उनको सोशल मिडिया ह्यान्डलबाट पोष्टबाट न्याय गर्दा, यस्तो देखिन्छ कि उनी पोषण विशेषज्ञ, ब्लगर र फिटनेस प्रशिक्षक हुन्।
कास्पर स्मीचेल जीवनशैली:
प्रति वर्षको वार्षिक तलब प्राप्त गर्दै € 7,800,000 (WTFoot रिपोर्ट), यो निष्पक्ष छ कि कास्परले धेरै पैसा कमाउँछ, जुन उनलाई ग्लैमरस जीवन बिताउनको लागि पर्याप्त छ। उनको विदेशी जीवनशैली जो फुटबलरको रूपमा उसको प्रदर्शनसँग सीधै जोडिएको छ उसको चम्किलो मर्सिडीज कारबाट सजिलैसँग सजिलै देखिन्छ।
कास्पर स्मीचेलको कार- उनी २०१ Mer मा मर्सिडीज चलाउँदै थिए।
माथीको फोटोमा जुन उसको खुलासा गर्दछ विदेशी कार, डेनिश गोलकीपर सेविलाको बिरूद्ध आफ्नो टीमको च्याम्पियन्स लिगको जीत मनाउन साना कार्लो इटालियन रेस्टुरेन्टमा आफ्नो बुबा पीटरलाई बाहिर खाजामा लिएका छन्।
कास्पर स्मीचेल अनटोल्ड तथ्यहरू:
उसको आफ्नै गोलकीपिंग ग्लोभ: प्रेसिजनन बेलायतको खेल प्रशिक्षण उपकरणहरूको नम्बर १ आपूर्तिकर्ता हो। कम्पनीले कास्परको साथ नजिकबाट काम गरेको छ यसको आफ्नै दायरा उत्पादन गर्न को लागी उसले 'श्मेइकोलोजी पञ्जा'। यी म्याट्रिक्स र क्लासिक ग्लोभ दायराहरू फुटबल लीगमा धेरै गोलकीपरहरूले पहिले नै प्रयोग गरिसकेका छन्।
प्रेसिजन स्मिचोलोजी ग्लोभ्स स्मीचेल परिवारको नामबाट थियो। छवि क्रेडिट: प्रेसिजनट्रेनिंग
छोरा र बुबाको सम्मान: कास्पर जो लेख्ने समयमा 32 हुन्छ उसले आफ्नो विकिपेडिया पृष्ठका अनुसार आफ्नो सीवीमा धेरै सम्पन्न जानकारी राख्दछ। यी व्यक्तिगत र क्लब सम्मानहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्दा, उनको उपलब्धिहरू तुलना गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ कुनै मेल खाएनन् जुन उहाँको महान बुबाको सम्मान स्क्रिनशट पनि तल देखाइएको छ।
कास्पर श्मीचेल को सम्मान।
32 / 1994 सीजनमा 1995 वर्ष पुरानो हो (पीटर स्मीचेल) आफ्नो क्यारियरमा यति धेरै हासिल गरिसकेका छन। उनको विकिपेडियाका सम्मानहरूले किन उनी फुटबल पंडितहरू, र साथै अघिल्लो र वर्तमान दुबै गोलकीपिंग सहकर्मी दुबै विश्व फुटबलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो गोलकीपरका रूपमा सम्मानित छन् भनेर न्यायसंगत छ।
पिटर स्मीचेलको व्यक्तिगत र क्लब सम्मान।
क्यास्पर स्मीचेलको ट्याटू: खेलकुद व्यक्तिको रूपमा, जब यो तपाईंको पहिलो ट्याटू प्राप्त गर्न आउँदछ, यसले यो बुझ्दछ कि एक सानो सानो सानो चीज चाहिन्छ, ट्याटू जुन सजिलै लुकाउन सकिन्छ निश्चित परिवारका आफन्तहरूबाट जो तपाईंलाई घण्टाको लागि बयान गर्न चाहान्छन् कथित साइड इफेक्टको बारेमा। यो कास्परको मामला हुन सक्छ। तल अवलोकन गरिए अनुसार, उसको माथिल्लो पाखुराको एक छेउमा लुकेको ट्याटू रहेको छ जुन भेट्न गाह्रो छ।
कास्पर स्मीचेल ट्याटू।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो क्यास्पर स्मीचेल बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।